अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या के हो ? | Kendrabindu Nepal Online News
अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या के हो ?
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार १९:०७
काठमाडौं । धेरै अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या हुन्छ । स्तनबाट दूध चुहिने समस्याले अविवाहित युवती निकै पीडा सँगै तनावमा हुन्छ । तर यो समस्यालाई समयमै उपचार गराए सामान्य हुन्छ ।
लाजको कारण पनि धेरै जसो युवतीहरू यस्तो समस्या लुकाएरै बस्ने गर्छन् । दूध चुहिने समस्या हुनुको प्रमुख कारण प्रोल्याक्टिन हर्मोन हो । स्तनपान गर्ने बच्चा नहुँदा वा अविवाहित महिलाको स्तनबाट दुध चुहिने समस्या भइरहेको हुन सक्छ ।
मस्तिष्कमा पिट्युरी ग्रन्थी हुन्छ । यसबाट प्रोल्याक्टिन हार्मोन उत्पादन हुन्छ । यो हर्मोनको काम स्तनको विकास गर्ने र बच्चा जन्मिएपछि दूध बनाउने हो । यो हर्मोन आवश्यक मात्रामा उत्पादन भइरह्यो भने केही असर पर्दैन । तर यसको मात्रा बढ्यो भने स्तनपान नगराउने महिला, अविवाहित महिला तथा पुरुषमा पनि दूध चुहिने समस्या हुन सक्छन् । प्रोल्याक्टिन हर्मोनको मात्रा बढ्ने अवस्थालाई ‘हाइपर प्रोल्याक्टिमेनिया’ भनिन्छ।
पिट्टुयरी ग्रन्थीमा कुनै कारणवश पलाउने ट्युमर, विभिन्न औषधिको असर वा अन्य कुनै रोगका कारण हर्मोनको मात्रा बढेको हुनसक्छ । खासगरि ग्याष्ट्रिक, साइकाट्रिससम्बन्धी औषधिको प्रयोग, धेरै कसिलो लुगा लगाउँदा या मस्तिष्कमा कुनै चोट लागेको भएपनि यो समस्या देखिन सक्छ।
यस्तो समस्या विश्वका १ प्रतिशत मानिसमा देखिन्छ । दुध चुहिने समस्या महिला–पुरुष दुवैमा देखिन्छ । तर बढी महिलामा नै भएको पाइन्छ । समयमा उपचार गरेमा यसको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
प्रोल्याक्टिन हर्मोनको मात्रा बढेपछि महिला–पुरुषमा विभिन्न लक्षण देखिन थाल्छन् । यौनसम्पर्क गर्न मन नलाग्ने, अल्छी लाग्ने, महिलामा महिनावारी अनियमित हुने, घाँटी दुख्ने वा संक्रमण हुनेजस्ता लक्षण देखिन सक्छन्।
यस्तै, बाँझोपन, हड्डी कमजोर हुने तथा योनीमा दुखाई हुनेजस्ता समस्या हुन सक्छन् । आँखामा पनि विभिन्न समस्या देखिन्छन् । किनकी अप्टिक नली पिट्युरी ग्रन्थी नजिकै हुन्छ । यो ग्रन्थीमा समस्या आउनेबित्तिकै अन्य सहायक नलीको विकासमा समेत रोकावट ल्याउन सक्छ । पुरुषहरुमा स्तन बढ्ने पनि हुनसक्छ ।
मुख्यकुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने हाइपर प्रोल्याक्टिमेनिया मष्तिस्कबाट आउने भएकाले आफ्नो ब्रेनलाई हरेक समस्याबाट मुक्त राख्नुपर्छ । छातीको समस्याले पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ । कहिलेकाँही क्यान्सरको सम्भावना हुने भएकाले यस्तो समस्या देखिए तत्काल चिकित्सको परामर्श लिनुपर्छ ।
(नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डा दीना श्रेष्ठ इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुन्)
Colostrum Leaking From The Breasts, hyperprolactinemia, Leaking from the breast, दूध चुहिने समस्या
Prevडा. उत्तम पच्या उत्कृष्ट चिकित्सक घोषित
अब एटिएमबाट रकम झिक्ने सीमा दैनिक ६० हजार मात्रNext